Beesha Wacweynteen Mudulood oo sheegay in loodiiday Xaquuqdii ay dalka ku laheed | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Beesha Wacweynteen Mudulood oo sheegay in loodiiday Xaquuqdii ay dalka ku laheed
Xili Magaalada Jowhar ay ka bilaabaneyso doorashada xubnaha Aqalka sare umatalaya Baarlamaanka HirShabeelle ayaa hadana waxaa wali arinkaas barbar socdo dhaliilaha loo jeedinayo Madaxda Sare ee Dalka iyo kuwa Maamulka HirShabeelle.
Cabdi Xasan Abuu-Bakar oo kamid ah Soomaalida ku nool Dalka Mareykanka ayaa sheegay in Beesha uu ka soo jeedo ee wacweyteen Mudulood aysan wax xubin ah ka helin Xubnaha Labada Aqal ee uu Dalka yeelanayo.
Beeshiisa ayuu sheegay in deegaano dhowr ah ay ka degto deegaanada uu Maamulka HirShabeelle ka arimiyo ,balse sida uu yiri la duudsiiyay Xuquuqdii ay ku lahaayeen Dalka ayna ka caanayaan arintaasi.
Sababta ayuu ku sheegay Cabdi Xasan in Madaxweyne Xasan Sheekh maxamuud iyo Madaxweynaha HirShabeelle ay leexsadeen kuraastii ay ka heli lahaayeen beeshooda Dowlada Soo socota.
Cabdi Xasan Abuu-Bakar ayaa sheegay in Dacwadooda ay ugudbiyeen Beesha Caalamka ayna sii wadayaan ololaha ay ku doonayaan iney kusoo dhacsadaan Qoondada ay kaga leeyihiin Dowlada la soo dhisayo.
“Beelaha qaar waxa ay ka leeyihiin labada Aqal ee dalka xubno tira badan,kuwo qaar ayaa leh wax kabadan 10 xubnoo,anagase xitaa hal manalaga siinin,taas waa cadaalad darro dalka ka jirta”ayuu yiri Abuu-bakar.
Dhanka kale Saleemaan Mazamed Cubdule oo isna ka Tirsan Jaaliyada Uk oo isna lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in ayan udulqaadan Karin Xadgudubka intaas La eg ee Beeshiisa Loo geestay, taas Badelkeeda ay qaadayaan Talaabo Cad ay ku muujinayaan Sida ay Xaqooda u dhacsan lahaayeen .
Waxa uu ugu Baaqay madaxda dowlada iyo Dowladaha Taaageero Soomaaliya in ay soo Faragaliyaan dhibaatada ay Tabaneeso beesha Wacweyteen Mudulood Loo Geestay .
Ugu danbeyn waxa uu baaq ujeediyay Madaxda Soomaalida iyo beesha caalamka wuxuuna ka dalbday iney meel ku soo sheegaan xuquuqdii ay Dalkan ku lahaayeen.